Dowladda Soomaaliya oo soo saartay Amar ku socda Shaqaalaheeda - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo soo saartay Amar ku socda Shaqaalaheeda
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya ayaa hakisay isku imaatinka shaqaalaha iyo xaadirintooda si looga fogaado faafidda cudurka Covid-19.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda oo loo diray Shaqaalaha dowladda ayaa waxaa la faray dhamaan Hay’adah dowladda & Shaqaalaha rayidka in ay yareeyaan isku imaatinkooda ayna ku Shaqeeyaan Guryahooda, iyaga oo adeegsanaya Barahooda Internet-ka, Hayeeshee Agaasimayaasha iyo inta aan laga maarmi Karin ay yimaadaan xarumaha Shaqada.
Dhamaan Shaqaalaha dowladda ayaa waxaa la faray lix qodob oo looga hortagayo faafitanka Cudurka safmareenka ah ee Coronavirus, kuwaas oo kala ah.
1: in ay ka fogaadaan salaamida gacan-qaadka ah kuna ekaadaan salaanta Islaamka.
2: In ay xirtan Afxirka Maska.
3: In hadii ay heli karaan ay gashadaan Glovis-ka Gacmaha.
4: in ay isticmaalaan dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ama Saabuun
5: In ay gacmahooda ka ilaaliyaan, indhaah, sanka iyo Afka inta karaankooda ah.
6: In qofkii isku arka calaamadaha Coronavirus in uu la xiriiro Goobaha caafimaad kana ilaaliyo Bulshada inteeda kale.
Go’aankan kasoo baxay Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya ayaa yimid kadib markii uu kordhay kiisaska cudurka COVID-19 ee Soomaaliya, isla markaana dad badan ay u geeriyoodeen.
Previous articleLaamaha Amniga oo Muqdisho ku qabtay Koox Burcad ah
Next articleGuddoomiyaha Aqalka sare oo hal arrin ka dalbaday dowladda & Dowlad Goboleedyada